Tolotra Miarina: miisa 111 ny orinasa efa notohanana | NewsMada
Tolotra Miarina: miisa 111 ny orinasa efa notohanana
Mandray andraikitra ny fanjakana hanampiana vonjimaika ny orinasa, manoloana ny krizy ara-pahasalamana sy ara-toekarena. Misy ny tolotra Miarina, hampindramam-bola ny orinasa amin’ny zana-bola ambany taha (8%). Aorian’ny fahenim-bolana no hanonerana ny vola indramina, mandritra ny 24 volana (2 taona). Misitraka izany ny orinasa madinika sy salantsalany, mampidi-bola latsaky ny 5 miliara Ar isan-taona, misehatra amin’ny indostria, ny fizahantany, ny fambolena sy fiompiana ary ny servisy na varotra.
Antontan-taratasy ilaina ny fangatahana ny taratasin-ketra telo taona farany, ny drafitra fitantanam-bola mandritra ny 24 volana. Eo koa ny taratasy avy any amin’ny banky tao anatin’ny 12 volana farany ho an’ny mpanjifan’ny BNI sy ny BOA. Manampy ireo ny kaonty sy ny fidiram-bola nanomboka ny marsa hatramin’ny jona 2019 ary ny fanambarana ara-bola ny taona 2020.
Nanomboka ny 17 jona teo ny tolotra Miarina. Nahatratra 111 ny orinasa efa nisitraka izany hatramin’ny 1 jolay teo. Mitotaly 4.955.500.000 Ar ny fampindramam-bola ka efa nivoaka ny 44.644.000 Ar. Misehatra amin’ny varotra ny 39%, amin’ny servisy ny 23%, amin’ny fitsaboana ny 14%, amin’ny asa tanana ny 10%, amin’ny fitaterana ny 7%, amin’ny fizahantany ny 6%, amin’ny fiompiana ny 1% ary taotrano sy asa vaventy (BTP) koa ny 1%.